KBZ Introduces Credit Assistance Program for SMEs | Myanmar Business Today
HomeBusinessKBZ Introduces Credit Assistance Program for SMEs
With the economic fallout from COVID-19 impacting small and medium-sized enterprises (SMEs) across Myanmar, KBZ Bank has introduced the COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs to provide urgent financial relief to its existing and new SME customers.
Under the program, launched on 11 June 2020, SMEs can apply for the six-month extension of current Overdraft and Term Loans, six-month deferral on Principal Loans and Interest, and Capitalization on Principal Loans and Interest for up to six months to ease the financial burden they face during this challenging period.
These recovery financing options apply to Term, Overdraft, or JICA SME Two-Step loans obtained at KBZ Bank’s SME Banking Department.
“For Myanmar’s small business owners of the country, the COVID-19 pandemic has become more thanahealth crisis. Many SMEs have been impacted financially after being forced to close their doors temporarily, and this has also affected employees and their families,” U Zaw Lin Aung, Senior Managing Director of KBZ Bank, said.
The COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs is aligned with the Myanmar government’s COVID-19 Economic Relief Plan (CERP). Under point 2.1.6 of the CERP, the Central Bank of Myanmar has permitted banks to restructure and reschedule existing loans extended to MSMEs that regularly pay interest and principal onatimely basis foralonger period.
With more than 90 percent of businesses in Myanmar classified as small and medium-sized enterprises, the Myanmar government has recognized that SMEs are the main driver for the country’s future national economic development. While the economic impact of the COVID-19 pandemic has yet to be quantified, it is expected that businesses, including SMEs, will bear the brunt ofareduction in demand for their products and services. The impact on SMEs will be severe, particularly because of higher levels of vulnerability and lower resilience related to their size.
To qualify for the COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs, existing customers should be using KBZ SME Loan Services for at least two years, engage KBZ Bank as their principal bank and haveapositive repayment history as of February 2020.
For new customers, KBZ Bank will assess the applicant’s industry and business, with greater priority given to SMEs providing services and products that support COVID-19 prevention, containment, and relief efforts in the country. All applicants will be required to submit company documentation and an emergency business plan.
To apply or find out more about the program, SME businesses can contact Relationship Manager at KBZ Bank’s SME Banking Department, or call +951373785 / +951372979 / +951372977 / +951377716 or email: smart.smebanking@kbzbank.com.
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်က လက်ရှိ SME customers များနှင့် customers အသစ်များအား အရေးပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးအပ်နိုင်ရန် COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs အစီအစဉ်ကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်က မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
SME လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါ အစီအစဥ်မှတစ်ဆင့် လက်ရှိ စာရင်းပိုချေးငွေ (Overdraft Loan) နှင့် ကာလသတ်မှတ်ချေးငွေ (Term Loan) များကို (၆) လအထိ သက်တမ်းထပ်တိုးခြင်း၊ လစဉ်ပေးဆပ်ရမည့် အတိုးနှင့် အရင်းများကို (၆) လအထိ ဆိုင်းငံ့ပေးခြင်းနှင့် လစဉ်ပေးဆပ်ရမည့် အတိုးနှင့် အရင်းများကို (၆) လအထိ ဆိုင်းငံ့၍ အတိုးအရင်းပေါင်း အချိုးကျ ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းတို့ ကို လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထက်ပါ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ SME Banking ဌာနတွင် ပုံမှန် ကာလသတ်မှတ်ချေးငွေ၊ စာရင်းပိုချေးငွေ သို့မဟုတ် JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေ ရယူထားသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
“ပြည်တွင်းက အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးဟာ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ တစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ ဒီကာလမှာ SME လုပ်ငန်းတော်တော်များများ မဖြစ်မနေ လုပ်ငန်းတွေ ယာယီရပ်နားလိုက်ရတဲ့အတွက် ငွေကြေးလည်ပတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်သွားပြီး ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာ မှီခိုနေရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကိုပါ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ ” ဟု ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ အကြီးတန်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဇော်လင်းအောင်က ပြောသည်။
COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့၏ COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ် (CERP) နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး CERP တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပန်းတိုင်အမှတ် ၂.၁.၆ အရ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ကာလရှည်ကြာ အရင်းနှင့် အတိုး ပုံမှန်ပေးဆပ်ခဲ့သည့် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ (MSMEs) ချေးယူထားသော ချေးငွေများကို restructure နှင့် reschedule ပြုလုပ်ခွင့်ပေးပြီး ချေးငွေပေးဆပ်ရမည့်ကာလ၊ အတိုးနှုန်းတို့ကို ဘဏ်များမှ သတ်မှတ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
န်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း SME လုပ်ငန်းများသည် တိုင်းပြည်အနာဂတ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စီးပွားရေးအရ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသေအချာ တွက်ချက်မထားနိုင်သေးသော်လည်း SME လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများမှာ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဝယ်လိုအားကျဆင်းနေသောကြောင့် အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများအတွင်း ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေရသည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ SME လုပ်ငန်းများမှာ အကူအညီ အထောက်အပံ့များစွာ ပိုမို လိုအပ်လာခြင်း၊ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအပေါ် မူတည်၍ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ခြေ နည်းလာခြင်း စသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အဓိက တွေ့ကြုံလာရမည် ဖြစ်သည်။
OVID-19 Credit Assistance Program for SMEs အစီအစဉ်တွင် လျောက်ထားလိုသော SME လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် လက်ရှိ customer များဖြစ်ပါက KBZ SME ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရယူထားပြီးသူများ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်ကို အဓိက အသုံးပြုနေပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ မပျက်မကွက် ငွေပြန်လည်ပေးသွင်းခဲ့သည့် customer များ ဖြစ်ရန်လိုကြောင်း သိရသည်။ customer အသစ်များလျှောက်ထားလာပါက လျှောက်ထားသူ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် လုပ်ငန်းပုံစံကို ကမ္ဘောဇဘဏ်က စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်၊ တားဆီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် SME လုပ်ငန်းများကို အထူး ဦးစားပေး ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လျှောက်ထားသူ အားလုံးမှာ လိုအပ်သည့် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အရေးပေါ် စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ်တစ်ခုကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) လျှောက်ထားလိုပါက SME လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲများနှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ SME Banking ဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာ Relationship Manager များအား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ SME Banking စီးပွားရေးဘဏ်လုပ်ငန်းဌာနသို့ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁ ၃၇၃၇၈၅၊ ၀၁ ၃၇၂၉၇၉၊ ၀၁ ၃၇၂၉၇၇၊ ၀၁ ၃၇၇၇၁၆ (သို့မဟုတ်) smart.smebanking@kbzbank.com အီးမေးလ်လိပ်စာမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Previous articleChubb launches three insurance products
Next articleMyanmar Secures 43,000 Tons of Rice as Reserve